Atsimo Atsinanana: mitobaka ny letisia, saingy tsy tafavoaka any an-toerana | NewsMada
Atsimo Atsinanana: mitobaka ny letisia, saingy tsy tafavoaka any an-toerana
Sahirana amin’ny fahitana lalam-barotra ny tantsaha manana letisia any Farafangana sy ny manodidina. Mitobaka ny vokatra any an-toerana amin’izao fotoana izao, lasa mivarotra fatiantoka indray ny ankamaroan’ireo tompom-bokatra.
Tombanana ho telo, na efatra, na dimy arivo ariary ny garaba, nefa manaiky resy amin’ny ady varotra tsy misy tombony ireo mpivarotra avy any ambanivohitra, tantsaha ny ankamaroany. “Voatery izahay manaiky izay vidiny omena anay, toy izay simba sy lo fotsiny ireo letisia ireo”, hoy ireo mpivarotra. Manaporofo izany ny fivangongoan’ny fakon’ny letisia ao Farafangana.
Telo herinandro izao ny nanaovan’ny kaominina tsena manokana ny fivarotana izany vokatra izany. Tsy vitsy ireo mpanangom-bokatra tonga any an-toerana nefa betsaka koa ny mbola tsy lafo rehefa mahazo izay tadiaviny ireo mpividy ambongadiny ireo. Ny any an-toerana indray, tompom-bokatra na mpanjifa tsotra, tsy mahalany ny tolotra.
Vahaolana naroson’ny faritra ny fananana karatra maha mpivarotra na mpanangom-bokatra. Mila matihanina ireo hahitana tsenam-barotra mazava, araka ny torohevitra avy ao amin’ny sampandraharahan’ny varotra any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana. Isan-taona koa anefa ny sehon-javatra toy izao, rehefa misokatra ny fotoam-pijinjana.
Tombanana ho 100 000 t isan-taona ny vokatra rehetra
Namokatra tsara ny 82% amin’ireo fototra letisia ho an’ny taona 2018-2019, raha ampitahana tamin’ny fotoam-pijinjana farany, any amin’ny tapany avaratra sy atsimo atsinanan’ny Nosy. Tarehimarika navoakan’ny CTHT*, mpanadihady ny vokatra voankazo sy legioma. Tsara rahateo ny toetr’andro nahazoana izany, raha ny fanadihadiana nataon’ny CTHT. Laharana fahatelo maneran-tany i Madagasikara amin’ny famokarana letisia, aorian’i Sina sy i Inde. Tombanana ho 100 000 t isan-taona ny vokatra nefa raha ny salanisa, 20 000 t ihany ny miondrana any ivelany, any Eoropa, fa misy koa any amin’ireo firenen-kafa, toy ny any Dubaï.